Global Voices teny Malagasy » Naneho hevitra momba ny horohorontany tany Haiti ny bilaogera Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Avrily 2019 5:53 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Karaiba, Haiti, Rosia, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Voina, Akon'ny RuNet
Horohoron-tany mahery vaika tany Haïti no nanjary loza voalohany manerantany tamin'ny taona 2010. Na dia lavitry ny loza aza ireo bilaogera Rosiana, dia nirohotra naneho ny fanohanan'izy ireo  [RUS] ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany. Tsy ela dia nanjary iray tamin'ireo lohahevitra noresahana be indrindra tao amin'ny RuNet ny zava-doza tao Haiti. Na dia maro aza ireo bilaogera nitanisa ny vaovao farany mifandraika amin'ilay loza [RUS], dia vitsy ireo nihoatra lavitry ny lohatenin'ny masoivohom-baovao. Manome songadina sasantsasany avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Rosiana ny GV .
Mpisera LJ dainik  [RUS] nanoratra hoe:
Mpisera Twitter playpausenstop niaiky  [RUS] ihany koa fa natahotra izy nijery ireo sary avy any Haiti.
Bilaogera mgsupgs nampitaha  ny horohorontany tany Haiti tamin'ny horohorontany tany Spitak, Armenia, ny taona 1988 . Nilaza izy fa marobe ireo niharam-boina noho ny faharatsian'ny fenitra fanorenana trano. Mitaky fahavononana maharitra amin'ny loza voajanahary mialoha ny hahatongavan'izany ity bilaogera ity, no sady nandinika manokana ny kalitaon'ireo tranobe (efa ratsy). Nanjary lohahevitra mafana tao amin'ny bilaogin'ilay mpampiasa LJ germanych  ny fenitra ratsy amin'ny fanorenana trano any amin'ny repoblika sovietika taloha.
Ho an'ny bilaogera sasany, nanome antony hijerena ny herin'ny natiora ny horohorontany. Hilarios, mpisera LJ, ohatra, nanoratra  hoe [RUS]:
Bilaogera iray hafa nanasongadina ny mihoatra ny zava-misy mampihoro-koditra amin'ny zava-mitranga. Vladimir Milov (mpampiasa LJ v-milov) nanoratra  hoe [RUS]:
Anton Maliavski (mpampiasa LJ maliavski) nanamarika  tsara fa mitady hahatsiaro an'i Haiti ny olona rehefa misy zavatra ratsy mitranga any:
Amin'ireo firenena amin'izao fotoana izao, i Haiti, no heveriko, fa ahitana vaovao ratsy be indrindra. Amin'ny ankapobeny, vitsy ny vaovao avy any Haïti, saingy vaovao ratsy foana. Nandritra ny folo taona farany, nahatsiaro ity nosy trôpikaly manana mponina falifaly ity ny olona noho ny zava-nitranga nampihoron-koditra tao. Tamin'ny voalohany, dia ny didy jadon'i Duvalier (Papa Doc  [EN], avy eo Baby Doc  [EN]), avy eo ny fitondran'i Aristide  [EN], fanonganam-panjakana, vono olona, ​fitroarana sivily naharitra, sns. Izany rehetra izany miampy ny fahantrana tanteraka eo amin'ny vahoaka. Ankehitriny, misy ny horohoron-tany. […] Matetika tsy mifarana mahafinaritra ny sarimihetsika momba an'i Haiti. “The Comedians ” [EN] miaraka amin'i Burton sy Taylor, “Heading South ” miaraka amin'i Charlotte Rampling – fitiavana tsy nahomby, fahafatesana ary herisetra no hita eny rehetra eny. Miala tsiny ho azy ireo aho. Ary tsy mazava ny fomba ahafahan'ny olona manampy ity firenena ity. Na dia izany aza, amin'ny ankapobeny, tsy mazava koa ny fomba hanampiana an'i Rosia… tratran'ny fandraikiraikena
Mpisera Mail.ru user elekorostele naneho hevitra hoe  [RUS]:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/21/137099/
 naneho ny fanohanan'izy ireo: http://drugoi.livejournal.com/3147931.html
 nitanisa ny vaovao farany mifandraika amin'ilay loza : http://fekalipsis.livejournal.com/2384349.html
 Spitak, Armenia, ny taona 1988: http://en.wikipedia.org/wiki/1988_Spitak_earthquake
 naneho hevitra hoe: http://www.liveinternet.ru/users/traveling/post118437666/#comment542622657